मध्यभोटेकोसी आयोजना ५० प्रतिशत पूरा, ३३ सय मिटर सुरुङ खनियो - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
मध्यभोटेकोसी आयोजना ५० प्रतिशत पूरा, ३३ सय मिटर सुरुङ खनियो
असार २४, २०७५ 4963 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
१ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाको ५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएको छ । सिन्धुपाल्चोकस्थित भोटेकोसी नदीमा मध्यभोटेकोसी जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजना आधा सकिएको हो ।
७ हजार १ सय मिटर लामो सुरुङ ३३ सय मिटर खनिएको आयोजना प्रमुख सुनिलकुमार लामाले बताए । ‘वर्षा सुरु भएपछि बाँध क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन,’उनले आइतबार ऊर्जा खबरसँग भने,‘अहिले सुरुङको निर्माण गति तीव्र पारेका छौं ।’
उनका अनुसार अब आयोजनाको ३ हजार ८ सय मिटर सुरुङ खन्न बाँकी छ ।
विद्युतगृहमा पनि निर्माण कार्य धमाधम अघि बढेको छ । विद्युतगृहमा जग खन्ने काम पूरा गरेर ढलान सुरु गरिएको छ ।
जुरे पहिरो, भूकम्प, बाढी–पहिरो, बाँधस्थलको जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या तथा ठेकेदारको ढिलासुस्ती लगायत कारणले लामो समय प्रभावित बनेको आयोजनाले विस्तारै निर्माण गति बढाएको छ । स्थानीय समस्या समाधानपछि आयोजनाको भौतिक प्रगतिको गति बढेको लामाले बताए ।
आयोजना अबको २ वर्षभित्र सम्पन्न गरेर विद्युत उएतापदन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । सुरु भएको ४ वर्ष बितिसक्दासमेत निर्माणले गति लिन नसकेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थलगत निरीक्षण गरेर निर्धारित तालिका अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
आयोजनाको लागत बढ्न नदिन सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकलको काम इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी) मोडेलमा चिनियाँ कम्पनी क्वाङसीले ठेक्का लिएको छ । इलेक्ट्रिमेकानिकलतर्फको काम एन्ड्रिज हाइड्रोले गरिरहेको छ ।
१२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण प्रवाह गरेको छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाईमा निर्माण भइरहेको आयोजनामा प्राधिकरण, सिन्धुपाल्चोकका चार इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता, सिन्धुपाल्चोकबासी र सर्वसाधारणको लगानी छ ।
आयोजना पूरा भएपछि वार्षिक ५४ करोड २० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजनाले विद्युत बिक्रीबाट वार्षिक २ अर्ब ९० करोड ४३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ ।